Mgbe Ọdachi Mere! | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Tuesday, January 29, 2013 Douglas Karr
Oge 48 gara aga abụghị ihe ọchị. Teknụzụ bụ ihe dị egwu, mana ọ zughi oke. Mgbe ọ bụrụ na ada ada, echeghị m na e nwere n'ezie na ọtụtụ nkwadebe i nwere ike… ma ị ga-eme.
May nwere ike chọpụtala na saịtị anyị na-eji nwayọ nwayọ ewe izu ole na ole gara aga. Ọ bụ iju nyere eziokwu na anyị nwere ya na a nnukwu ngwugwu ngwugwu jikọtara na ihe nkesa data na netwọk nnyefe ọdịnaya. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ohere, anyị kwadoro saịtị ndị ọzọ ebe ahụ, kwa too na nke ahụ bụ mmejọ anyị!
Otu oru ngo anyi bu elekọta mmadụ media nlekota ngwá ọrụ nke jikọtara na Twitter na Facebook, na-anakọta data na ọtụtụ puku ìgwè n'ahịa egwuregwu. Otu ugboro n'ụbọchị ọ na-achịkọta ozi ndị ofufe na ndị na-eso ụzọ, na-achịkọta ya na nchekwa data. Anyị na-eme nnukwu mmepe na ọrụ ahụ ma na nso nso a chọpụtara na ụfọdụ stats ahụ ezighi ezi. Anyị ahịa, Okenye Pat, nwee ndidi na anyị ka anyị na-edozi nsogbu a.
Mgbe niile h ** l mebiri! Ọ na-egosi usoro maka ikpokọta ozi ahụ malitere na-agba ọsọ n'ime nkeji karịa otu ugboro n'ụbọchị. Ebe nchekwa data anyị toro karịa 1G n'ime ụbọchị, na-ebelata sava anyị ma na-ewere ọtụtụ ohere na ya. N'abalị ọzọ m na-ele anya ka saịtị ọ bụla anyị nwere na akaụntụ ahụ malitere ịgbadata otu n'otu. Ug.
Anyị na-eme atụmatụ ịbuga Martech na WPEngine iji tinye ya na gburugburu ebe obibi raara onwe ya nye nkwado ndabere, nnyefe ọdịnaya ejiri, yana sava sava na-enwusi ọkụ. Anyị nwere di na nwunye ndị ahịa ndị ọzọ na ya ma nwee nnukwu obi ụtọ na ma ọrụ ahụ ma nkwado ha dị egwu. Ọ bụghị na Mediatemple dị njọ, ọ bụ naanị na e wuru gburugburu ebe a maka blọọgụ mbipụta dị ka nke anyị na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ. N'etiti abalị, edere m ụmụ okorobịa na WPEngine na ha kpọbara m n'ụtụtụ! Daalụ ụmụ okorobịa!
Ọzọ, anyị malitere ile anya otu esi edozi nchekwa data. Ọ kwụsịrị ihe nkesa data ahụ wee mebie tebụl kachasị ukwuu (nke nwere data dị n'etiti!). Ebe sava ahụ juputara, anyị enweghị ike ịrụzi… anyị enweghị ike ịnweta faịlị, enweghị ike ịkwado ya… anyị rapaara. Ndị folks na MediaTemple wụlitere ma rụzie tebụl ahụ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịme nkwado zuru oke wee bido weghachite saịtị ndị ọzọ.
Ga WPEngine abụghị ihe mgbu. Ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịnweta nchekwa data anyị, anyị ga - ewere foto na - adịbeghị anya nke ebe nchekwa data ahụ for nke kpatara ụfọdụ ihe tufuru usoro anyị niile na usoro ahụ. Anyị nwere Wepụ saịtị WordPress backups, kwa, mana nchekwa data anyị buru ibu nke na ijikọ ngalaba nchekwa niile ga-ewe ogologo oge.
Ya mere, anyị weghachite data ma na-agbanye mkpọrọgwụ site na 2,500 + posts ma jiri nlezianya dezie ha. Ekwenyesiri m ike na anyị ga-ewere ntakịrị ihe na SEO n'ihi na nke ahụ gbanwere ụzọ URL… yabụ anyị buru nnukwu ibu wee gbanwee usoro anyị nke permalink (na-enweghị ụdị). Ọ bụ ihe m kwesịrị ime maka nwa oge, yabụ ugbu a bụ oge ka mma karịa mgbe emechara.
Anyị hapụrụ akụkọ ochie anyị. Ọ bụ eserese dị arọ (na-enweghị CSS sprites) ọ bụghịkwa enyi na enyi ịmegharị. Anyị ekpebiela iji mee ka ihe ndị a gbanwee Iri abụọ na iri na otu isiokwu nke ahụ bụ ọkọlọtọ na WordPress maka ugbu a. Ọ dịla njikere HTML5 ma nwee ọtụtụ atụmatụ atụmatụ eji eme ihe dị mma iji mee ihe.
Ka ọ dị ugbu a, Jenn jigidere ebe ewusiri ike na DK New Media - juggling ole na ole oru na-akụ ha si nnukwu oge. Stephen wetara ụbọchị niile (ọ na-arụ ọrụ abalị!), Ezi enyi Adam Obere agbanye ma nyere aka, MediaTemple kụpụrụ ya n'ogige ahụ, ma WPEngine nyekwara aka, kwa. Ekele dịrị onye ọ bụla… anyị abịaghachila na ịde blọgụ ọzọ!
Ugbu a ọ bụ oge m ga-ehi ụra :). Mgbe ahụ, anyị ga-edozi iPad na gburugburu ebe obibi!
Tags: ndabere ngwa mgbakwunyecdnonye mgbasa ozipluginfotoWordPress ndaberewordpress weghachiweta
Indy si Computer Geek
Ọkt 27, 2011 na 9:43 PM
Ọ dị m nwute ịnụ na ị nwere nsogbu ndị a. Nke a bụ ebe ọkachamara IT, dị ka mụ onwe m, nwere ike ịnwe ma na-enyocha usoro gị iji gbochie ọnọdụ dị otú ahụ. Ekwenyesiri m ike na ị na-enweta ọtụtụ okwu na post dị otú a, mana ọnọdụ ahụ dị mfe. Nlekọta kwesịrị ekwesị, ịkọ uto na ịkọ amụma kwesịrị ịkwadebe saịtị gị na nchekwa data gị maka ọkwa a. M ga-enwe mmasị iso gị kwurịta okwu, banyere ọnọdụ a, yana usoro enwere ike ịme iji gbochie n'ọdịnihu. Anyi ekwuola n’oge gara aga, ị ma m n’igwe twitter gị dịka @indyscompugeek.
Daniel, HeadGeek nke Indy's Computer Geek
Ọkt 27, 2011 na 9:47 PM
O doro anya, Daniel! N'okwu a, anyị nwetara ihe anyị kwụrụ… wee kwụọ anyị ụgwọ. Anyị nọ na mmefu ego nke otu.
Ọkt 30, 2011 na 1:27 AM
Doug - UGH! ziri ezi. Anọ m na saịtị a ihe dị ka otu izu ma ọ bụ karịa gara aga na-agụ blog ma achọpụta m na ọ dị nwayọ. Echere m nke ọma iziga gị ozi ma na-ekwu otu a, mana echere m onye m ga-agwa 'Nwoke ahụ' na saịtị ya “dị umengwụ.” Ugbu a ka m matara ihe kpatara ya! Yabụ, na-enwe obi ụtọ na gị (na posse gị) nwere ike iweghachi ya ma rụọ ọrụ. Youtụleela itinye Studio Studio nke StudioPress - http://www.studiopress.com - M na-eji ma ọ bụrụ na saịtị m na saịtị ndị ahịa m niile. Ngwunye ngwanrọ siri ike - Hụ ya n'anya!
Ọkt 30, 2011 na 11:06 AM
Ndewo Greg! Anụla m nnukwu ihe banyere usoro Jenesis. Anyị ejibeghị ya mana echere m na m nwere ike ịpụ WordPress guru, Stephen, iji wuo isiokwu. Isiokwu a malitere site na iri abụọ na iri na otu mana ọ bụ nke ahaziri ma kachasị. Ruo ugbu a, ọ dị ka ọ na-ejide nke ọma!